Madaxweyne Xasan: “Go’aanada siyaasadeed ee dowladda, ma saameyn doonto Jaaliyadaha Soomaaliyeed” – Radio Muqdisho
Madaxweyne Xasan: “Go’aanada siyaasadeed ee dowladda, ma saameyn doonto Jaaliyadaha Soomaaliyeed”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fedaraalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in go’aanada siyaasadeed ee ay dowlada Soomaaliya ka qaadaneyso dalalaa Caalamka aysan wax saameen ah ku yeelan doonin Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Caalamka.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlayay Laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa hoosta ka xariiqay in go’aannada siyaasadeed ee dowladda ka qaadaneyso dalalka caalamka uusan ahayn mid wax u dhimaya Soomaalida magangelyada u jooga dalalka caalamka.
“Dalka Soomaaliya waxa uu ka midyahay hay’adaha siyaasadeed gobolka iyo tan caalamiga ee jrita, siyaasadda ay Soomaaliya ciyaareyso waa kaas, caalamka sida uu u dhaqmo ee heshiisyada caalamka ku jira ayaana ku dhaqmeynaa, marka Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku nool ma saameyn doonto, go’aan kasta oo ay dowladda ka qaadato mid ka mid ah dowladaha caalamka, waayo waxa ay ku joogaan xeerarka caalamka u degsan” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha oo ka hadlayay Soomaalida ku nool dalka Yemen ayaa tilmaamay in dowladda ay ka go’antahay inay u gurmato muwaadiniinteeda ku xaniban Yemen.
“Dowladda siyaasad cad ayay ka qaadatay in gurmad loo fidiyo Soomaalida ku xaniban Yemen, dowladda howshani waa ay bilowday oo qaar ka mid ah muwaadinta waa laga soo qaaday Yemen, sidoo kale Jimciyadda Quruumaha ka dhexeyso iyo dalalka khaliijka ayaan la wadaagnay inay gacan nagu siiyaan sidii dadka looga soo saari lahaa Yemen, dowladda siyaasad cad ayaa uga degsan badbaadinta muwaadiniinteeda, waayo horey sidaan oo kale ayaan dad ku dhibaateysnaa dalalka Kenya iyo Koonfur Sudan aan ka keenay, marka kuwani inta ka dhiman dib ayaa dalkooda ugu soo celinaynaa” ayuu yiri Madaxweynaha.
Barcelona oo Dirqi uga Badisay Kooxda Celta Vigo “Sawirro”